Xiaomi Designer account ရှိသူများအတွက် မြန်မာယူနီကုဒ်ဖောင့်အလှ mtz ဖိုင်များ
ကိုခွန်စိုးဇော်သူရဲ့ မြန်မာယူနီကုဒ်ဖောင့်အလှလေးတွေပါ။ အရင်က တစ်ခုတင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ခုက အပ်ဒိတ်ထပ်လုပ်ပေးထားတဲ့ ဖောင့်တွေရော၊ တစ်ချို့ဖောင့်အသစ်လေးတွေကိုပါ ထပ်ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဖောင့် အမျိုး (၂၂) ပါပါတယ်။ လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာလင့်ခ်ပေးထားပါတယ်။ ဒေါင်းယူလို့ရပါတယ်။ မြန်မာယူနီကုဒ်ဖောင့်အသစ်များ ဒေါင်းလုဒ်ရယူရန် 👇👇👇👇👇 https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZFpuNZrWqtn7RnUvQCVv8pwFrBr89fYFyV
MIUI ရဲ့ Calendar app ကို အသုံးပြုခြင်း
မင်္ဂလာပါ... Mi Fans များ ခင်ဗျား။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ MIUI Rom မှာ ပါဝင်တဲ့ မိမိအတွက် အကောင်းဆုံးသော Events and birthday reminders တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Calendar (ပြက္ခဒိန်) app လေးအကြောင်း ပြောပြပေးပါ့မယ်။ Calendar​ app အကြောင်းဆိုတာထက် Update မှာ ပါလာတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်အကြောင်း‌ ပြောပြပေးမှာဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတစ်ခေါက် Update တော့ Calender app ထဲမှာ စံချိန်မှတ်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက် (Countdown feature) ကို ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာဆိုပါစို့..... ကျွန်တော်တို့ လုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာ တစ်ပတ်လောက်လိုသေးတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီအလုပ်အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်မတိုင်ခင် တစ်ရက်နှစ်ရက်အလိုလောက်ကို စံချိန်သတ်မှတ်ပေးထားလို့ ရတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်မျိုးပါ။ Contact ထဲမှာမှတ်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေတွေရဲ့ မွေးနေ့တွေကို Calendar ဆီကို ဘယ်လိုပို့ပေးရမလဲ။ 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 Calendar app ထဲဝင်ပြီး ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖန်တီးဖို့အတွက် ညာဘက်အောက်ခြေနားမှာရှိတဲ့ အပေါင်းခလုတ်လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဖြစ်စဉ်နာမည်ပေးပြီး ရက်စွဲတစ်ခုခု သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း 'Import birthday from contact
MIUI တွင် Built-in ပါဝင်လာသော Mi Screen Recorder ကို အသုံးပြုခြင်း
MIUI ကို အသုံးပြုနေကြတဲ့ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ တောင်းဆိုမှုအများဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်တွေထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ Screen Recorder (မျက်နှာပြင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း) လုပ်ဆောင်ချက်ဟာဆိုရင် နောက်ဆုံးမှာတော့ MIUI 8 မှာ ပါဝင်လာခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ပလေးစတိုးမှာ အလွယ်တကူရရှိနိုင်တဲ့ မျက်နှာပြင်မှတ်တမ်းတင်ဆော့ဝဲတွေဟာ ၎င်းတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို အပြည့်အဝအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် အထူးအသုံးပြုသူခွင့်ပြုချက် (Root access) လိုတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုတတိယပါတီအက်ပ်တွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်မယ်ဆိုရင် MIUI 8 မှာပါဝင်လာတဲ့ မျက်နှာပြင်မှတ်တမ်းတင်အက်ပ်ဟာ အထူးအသုံးပြုသူခွင့်ပြုချက်ရှိနေဖို့ လုံးဝမလိုပါဘူး။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ စမ်းသပ်အဆင့်မှာပဲ ရှိနေသေးတာဖြစ်လို့ MIUI စမ်းသပ်ဗားရှင်းတွေမှာပဲ သုံးလို့ရနိုင်ဦးမှာ ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် အဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေ ပြီးသွားရင်တော့ တည်ငြိမ်ဗားရှင်းတွေမှာပါ အသုံးပြုနိုင်တော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကို မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့အချိန်မှာ မှတ်တမ်းတင်ခလုတ် (Record button) ကို မိမိအဆင်ပြေတဲ့နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ၎င်းခလုတ်လေးဟာလည်း သင့်ရဲ့ အသုံးပြုနေမှုကို အနှောင့်အယှက်ဖ
သင်းမ်ပြုလုပ်ရာတွင် Xml ဖိုင်ထဲမှာရှိသော အရောင်နှင့်ပက်သက်သော String များကို ရှာဖွေနည်း
မင်္ဂလာပါ .... Mi Fans များ ခင်ဗျား။ သင်းမ်တွေပြင်တဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ theme_values.xml ရယ်၊ png format နဲ့ ပုံတွေရယ်အပြင် .9.png format နဲ့ပါ ပြင်ကြရတာကို သိတဲ့သူတွေ သိကြမှာပါ။ ဒီ Guide လေးက သင်းမ်တွေပြင်တဲ့နေရာမှာ xml file ထဲမှာ အရောင်နဲ့ပက်သက်တဲ့ String value တွေကို ရှာဖို့ အနည်းငယ် အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ လိုအပ်တာတွေကတော့: 1.Notepad++ ( on Google ) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.woop.notepad 2. Apkeditor ( on Google ) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmail.heagoo.apkeditor ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ နမူနာအနေနဲ့ file explorer module ကို ပြင်ဖို့အတွက် အစမ်းပြထားပါတယ်။ ကျွန်တော် File explorer ထဲမှာပါတဲ့ Search text ဆိုတဲ့ စာသားကို ပြောင်းပြပါ့မယ်။ Apk editor ကို ဖွင့်ပါ။ Full Edit ကို ရွေးပြီး နှိပ်ပါ။ Search ဆိုတဲ့ String ကို ရှာပါ။ theme_values.xml ကို ဖွင့်ပြီး အောက်မှာပြထားတဲ့စာသားကို ရေးထည့်ကြည့်ပါ။ (မိမိရေးချင်တဲ့စာသားကို ရေးထည့်လို့လည်း ရပါတယ်။) နောက်ဆုံးအဆင့်: သင်
Mi Series နဲ့ Redmi series မကွဲကြသူများအတွက်
(အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ်စီးတဲ့မြင်း အထီးအမတော့ ကွဲပြားစွာ သိသင့်ပါတယ်။) အခုဆိုရင် Xiaomi ရဲ့ Mi note2နဲ့ Mi mix ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ ဒီတော့ လက်ရှိ မှားယွင်းနေကြတဲ့ အခေါ်အဝေါ်လေးတွေကို ပြုပြင်သင့်တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ redmi note2နဲ့ mi note2အပြင် mi max နဲ့ mi mix ကို rom file တွေ။ firmware တွေတောင်းတဲ့အခါ ကွဲကွဲပြားပြား မသိရင် မှားပြီး တိုင်ပတ်တော့မှာပါ။ ဒီရှေ့မှာလည်း redmi note နဲ့ mi note အပြင် mi3နဲ့ redmi3မှာတင် သင်ခန်းစာ ရကြသူတွေလည်း ရှိခဲ့ကြလို့ပါ။ (မှားတော့ service သမားတွေ အလုပ်များရတာပေါ့) ဒါပေမယ့် Xiaomi Company အနေနဲ့ ဒီလိုမှားယွင်းမယ့် အရေး ကြိုတင်သိလို့ သူရဲ့ ထုတ်ခဲ့သမျှသော Mi/redmi ဖုန်းတွေကို Code name တွေပေးထားပါတယ်။ Code name ရဲ့ သဘောကတော့ ဖုန်းတွေကို Firmware တင်တဲ့အခါမျိုးမှာ အမှားအယွင်းမရှိအောင် သီးသန့်နာမည်တစ်ခု ထား ထားပေးတဲ့ သဘောမျိုးပါ။ Mi/Redmi Series တွေပါ ကွဲကွဲပြားပြားသိရှိအောင် ခွဲရေးပေးထားပါတယ်။ *** Setting > about phone > model number မှာ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။*** device name မှာ မိမိနှစ်သက်ရာ အ
Xiaomi Users တွေသိသင့်သော Android Version နဲ့ Device ID များ
မေးနေကြလို့ရှာပြီးတင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ပုံထဲက MIUI Version မှာရေးထားတဲ့ MIUI 8 Stable 8.1.3.0 LHNCNDI ဆိုတာဘာလဲ Android Vweion, Device ID code name တွေကိုဖော်ပြပေးတာပါ။ L is Lollipop HN is Redmi Note3CN is china DE/DI is may be network type J = Jelly Bean / Android 4.1–4.3.1 K = KitKat / Android 4.4–4.4.4, 4.4W–4.4W.2 L = Lollipop / Android 5.0–5.1.1 M = Marshmallow / Android 6.0–6.0.1 Information Deice ID by MIUI ROM MA = Mi 1 / Mi 1S XA = Mi2/ Mi 2S XD = Mi3/ Mi4XG = Mi4LTE-CT XI = Mi 4i XK = Mi 4c AJ = Mi 4S AA = Mi5AG = Mi 5S BG = Mi 5S Plus BC = Mi Max BD = Mi Max Pro AH = Mi Mix XE = Mi Note XH = Mi Note Pro AD = Mi Note2XF = Mi Pad AC = Mi Pad2HB = Redmi 1 HF = Redmi 1S-3G / HM1STD HH = Redmi 1S-4G / HM1SLTE HC = Redmi 1S WCDMA / HM1SWC HJ = Redmi 2/Prime HP = Redmi3(dulu) AI = Redmi3/3Pro /3Prime AL = Redmi 3S/X/ 3S Prime CE = Redmi4CC = Redmi 4A BE = Redmi4Prime
Facebook See Conversion / ဖောင့်ပြောင်းကြည့်ပါ ဇွတ်ဖော်နည်း
ဆိုနီဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ Walkman Music player ကို Xiaomi ဖုန်းမှာ သုံးချင်ပါသလား။ အောက်က Apk လေးကို ဒေါင်းပြီး ပုံမှန် Apk သွင်းသလိုပဲ သွင်းလိုက်ရုံပါပဲ။ Root ရှိဖို့လည်း မလိုအပ်သလို ဘာပြဿနာမှလည်း မရှိပါဘူး။ အားလုံးအဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ဒေါင်းလုဒ်ရယူရန် 👇👇👇👇👇 https://drive.google.com/file/d/0B4jFNFNy_kEUblVSdFNuN2poUWc/view?usp=drivesdk
MIUI 8 Android 6.0 နဲ့ 7.0 တင်ထားတဲ့ China rom များအတွက် Google apps များ အလွယ်ဆုံးထည့်သွင်းနည်း
မင်္ဂလာပါ ... MIUI China Rom အတွက် ဂူဂဲလ်ဆော့ဝဲတွေ သွင်းဖို့ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဖိုရမ်ထဲမှာ China rom အသုံးပြုသူတော်တော်များများဟာ ဂူဂဲဆော့ဝဲတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး အခက်ကြုံနေကြတာကို တွေ့နေရလို့ပါ။ ဂူဂဲဆော့ဝဲတွေသွင်းဖို့ဆိုရင် ပထမဆုံး ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်😁😁😁 Gapps များ ဒေါင်းလုဒ်ရယူရန် 👇👇👇👇👇 https://drive.google.com/file/d/0B5CNG_NODqE0MkxpLXphOFBPcGM/view?usp=sharing ဒါက အပေါ်ကလင့်ခ်ကဟာကို ဒေါင်းပြီး ဖြည်ထုတ်လို့မရခဲ့ရင် ဒီအောက်ကလင့်ခ်ကဟာကို ဒေါင်းပြီး ဖြည်ထုတ်ဖို့ပါ။ 👇👇👇👇👇 https://drive.google.com/open?id=0B5CNG_NODqE0WWVtTmNYQ2NTT3M ထည့်သွင်းရန်အဆင့်များ- ၁။ အပေါ်မှာ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားတဲ့ Gapps zip ဖိုင်ကို ဖြည်ထုတ်လိုက်ပါ။ ၂. ဖြည်လို့ရလာတဲ့ဖိုင်တွေကို Copy ကူးပြီး Internal storage> MIUI Folder ထဲကို ဝင်ပါ။ ၃. backup နာမည်နဲ့ဖိုဒါထဲကို ဝင်ပါ။ (မရှိရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အသစ်လုပ်လို့လည်း ရပါတယ်။) ၄. AllBackup နာမည်နဲ့ဖိုဒါထဲကို ထပ်ဝင်ပါ။ (မရှိရင် ကိုယ့်ဘာသာကို
Xiaomi ရဲ့ MIUI Rom မှာ ဓာတ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေကို Hide လုပ်ခြင်း၊ ပြန်ဖေါ်ခြင်း (နည်းလမ်း ၂)
အရင်ပို့စ်တစ်ခုမှာတော့ Xiaomi ဖုန်းရဲ့ MIUI Rom မှာ Built-in ပါတဲ့ Feature လေးတွေထဲကမှ Gallery ထဲက ဓါတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေကို ဖျောက်ဖို့၊ ပြန်ဖေါ်ဖို့ လုပ်နည်းလေးကို ပြောပြပြီးပါပြီ။ အခုပြောပြမယ့်နည်းက Explorer ကနေ ဖျောက်တဲ့နည်းလမ်းပါ။ ဒီနည်းက ပိုပြီးကောင်းပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အင်တာနက်လည်း မလိုသလို Sync လုပ်ဖို့လည်း မလိုပါဘူး။ Offline ဖျောက်ထားလို့ရတဲ့ နည်းလမ်းမို့လိုပါ။ ဓါတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေအပြင် အခြားဖိုင်တွေကိုပါ ဖျောက်ထားလို့လည်း ရပါတယ်။ သိပြီးသားသူတွေလည်း ရှိပါလိမ့်မယ်။ သိပြီးသားဆိုရင် ကျော်သွားပေးပါ။ အရင်ဆုံး Explorer ထဲဝင်ပါ။ ကိုယ်ဖျောက်ထားချင်တဲ့ဖိုင်၊ ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုတစ်ခုခုကို ရွေးပေးပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကို နမူနာလုပ်ပြပါမယ်။ ကိုယ်ဖျောက်ထားမယ့်အရာပေါ်ကို နည်းနည်းကြာကြာ နှိပ်ထားပါ။ အောက်မှာပေါ်လာတဲ့ Menu ထဲကမှ More ကိုနှိပ်ပါ။ ပေါ်လာတဲ့ Menu ထဲကနေ Hide ကိုနှိပ်ပါ။ ဖျောက်ထားမှာသေချာသလားဆိုပြီး အတည်ပြုမေးပါလိမ့်မယ်။ Hide ကိုပဲနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဖျောက်ချင်တဲ့ဖိုင်ပျောက်သွားပြီး Hidden folder ထဲကို ရောက်သွားပါပြီ။ Hi